Tantara an-tsary :: Nivoaka ilay boky "Dictature À Brickaville" an'i Pov sy Dwa • AoRaha
Tantara an-tsary Nivoaka ilay boky « Dictature À Brickaville » an’i Pov sy Dwa
Enina taona aty aoriana. Namoaka vokatra vaovao indray i POV sy Dwa, Malagasy mpahay tantara an-tsary malaza manerana izao tontolo izao. Efa miparitaka any amin’ireo trano fivarotam-boky any Eoropa izy io. Ho avy eto an-tanindrazana amin’ny fiafaran’ity volana aogositra ity izany.
Mahaliana ny maro ilay tantara « Mégacomplots à Tananarive », nivoaka tamin’ny taona 2011 sy ny « Coup d’état à Tamatave », tamin’ny taona 2014. Andiany fahatelo amin’ireo vokatra hiarahan’ireto andrarezin’ny tantara an-tsary ireto ny « Dictature à Brickaville ». Mampanantena tantara mampientanentana sy mahatsikaiky hatrany izy mirahalahy ireto. Entiny mitsidika an’ireo saha feno fary mitandahatra any amin’ny faritra atsinanan’ny Nosy ireo mpamaky. Any no hamoahana ilay tantaran’i Rémy, izay tafiditra tao anaty aferana toaka gasy raha fianarana asa no nahatongavany tany. Mitantara ny fiainan’ny ankamaroan’ireo tanora malagasy ankehitriny izy io.
Ny 16 jona, fotoana nandanian’ireo solombavambahoaka malagasy ilay lalàna momba ny toaka gasy, no nahavitana ny tantara. Hiaina anaty tantara iray izay mifandringotra amin’ny fiainam-piarahamonina malagasy izany ireo mpamaky.
IFM Analakely Voatazona ny findramam-boky
Famoahana vokatra vaovao :: Hampiara-peo amin’ny hira iray i Big Mj sy Ken (Mage 4)